पोखरा महानगर अपडेटः धनराजलाई १ हजार ३५५ मतको अग्रता
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा धनराज आचार्यले मतान्तर बढाउँदै लग्नु भएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार आचार्यले नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण थापासँगको मतान्तर १ हजार ३५५
पोखरा । कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका विष्णु कुमार के.सी. विजयी हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका युवराज कुवँरलाई ७ सय ६३ मतल पछि पार्दै के.सी. विजयी हुनुभएको हो ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका मिनबहादुर गुरुङ निर्वाचित
पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका मिनबहादुर गुरुङ निर्वाचित हुनु भएको छ । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार मिनबहादुरले नेकपा एमालेका विक्रम गुरुङलाई ४८२ मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनु भएको
पोखरा महानगरको मतगणना दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरु भएको सर्वदलीय बैठक लम्बिएपछि मध्यान्ह १२ बजेसम्म पनि गणना सुरु हुन नसकेको हो ।
पोखरामा दिउँसै अन्धकार !
वर्षासँगै पोखरामा दिउँसै अध्यारो हुँदा सवारी साधनहरू हेडलाइट बालेर हिँडेका छन् भने पानी परेपछि दुईपांग्रे सवारी साधन तथा पैदलयात्रु बिच बाटोमै रोकिएका छन् ।
तालबाराही र विध्यवासिनी मन्दिरमा दर्शनार्थीहरुको घुँइचो
पोखरा । नयाँ वर्षको पहिलो दिन आज बिहीबार पोखराको तालबाराही र विध्यवासिनी लगायतका विभिन्न मन्दिरमा दर्शनार्थीहरुको घुँइचो लागेको छ । पोखराको फेवातालको बीचमा रहेको ताल बाराही मन्दिरमा दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा
देशका सात शहरसम्म पोखराबाट नियमित हवाई सेवा विस्तार
बुद्धको पोखरा–जनकपुरको पहिलो उडानमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको टिम जनकपुर गएको थियो । पहिलो उडानमा १८ जना यात्रु गएकोमा फर्किदा १६ यात्रु पोखरा फर्केका थिए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदै गण्डकी प्रदेश
मन्त्री थापाले प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।